Xukuumadda Somaliland Oo Si Weyn Soo Dhawaysay Cuna-Qabatayntii La Cusboonaysiiyey Ee Soomaaliya – somalilandtoday.com
Xukuumadda Somaliland Oo Si Weyn Soo Dhawaysay Cuna-Qabatayntii La Cusboonaysiiyey Ee Soomaaliya
Xukuumadda Somaliland waxay xaqiijisay inay aaminsan tahay in hub kasta oo la siiyo Soomaaliya uu halis ku yahay JSL.
Somaliland waxay ku guubaabisay QM, IGAD iyo Midowga Afrika in ay taageeraan sidii dib loogu bilaabi lahaa wada-hadalkii u Somaliland iyo Soomaaliya.
Hubka la siiyo Soomaaliya wuxuu ku dambaynayaa gacanta argagixisada.
Hargeysa(Somalilandtoday)- Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku bogaadisey xubnaha Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay qaraarkii ay ku cusboonaysiiyeen cuno-qabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya 14kii Bishan November.
Sidaasna waxa lagu bayaamiyey war-murtiyeed maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah JSL oo soo gaadhay Xafiiska Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA, waxaanay dowladda JSL eedaysay Soomaaliya in aanay siyaasad ahaan iyo amni ahaan awood u lahayn inay xafido Hubka iyo Rasaasta, sida ku cad Warbixin Golaha Ammaanka la horgeeyey 9kii bishan November oo qiraysa in aanay Soomaaliya tahli karin inay hanato hubka iyo saanada ciidammada.
KA Akhri Lifaaqan War-murtiyeedka Xukuumadda Somaliland
press release on security council 02 (1)